Uhlu lwamabhonasi wediphozithi ku-FastPay online casino 2021
Fastpay amakhasino awekho amabhonasi ediphozi
Izici ezingekho imivuzo yediphozi
Izinzuzo zamabhonasi wediphozithi ku-FastPay casino
Imininingwane eyisisekelo mayelana namabhonasi ediphozi
Izinhlobo zemivuzo yediphozithi
Level Up Umvuzo
Ibhonasi yosuku lokuzalwa
Ama-spins amahhala ngeMigqibelo
Njengoba ibisebenza kusukela ngo-2018, i- Fastpay Casino isheshe yasithola isimo sesikhungo esiqinile. Abahleli banikeza abasebenzisi babo uhla olubanzi lokuthengiselana kwezezimali, izinkokhelo ezisheshayo kanye nohla olukhulu lokuzijabulisa kokugembula. Ukunakekelwa okukhethekile kufanele kukhokhelwe izikhuthazo zamakhasimende, okungukuthi, awekho amabhonasi ediphozi.
Enye yezinhlobo zokuphromotha ezivame ukusetshenziswa kumakhasino we-Fastpay awekho amabhonasi ediphozi. Ukuphathwa kwalesi sikhungo kubakhokhisa abasebenzisi baso abasebenza mahhala ngokuphelele. Ibhonasi yediphozithi isho amandla okuwina imali yangempela bese uyihoxisa ngokushesha okukhulu ngendlela elula kumgembuli.
Lesi sipho esivulekile sonyusa kakhulu izinga lokuzethemba komsebenzisi futhi sithinta kahle umbono wabo wesayithi elibonakalayo. Ngaphezu kwalokho, lolu hlobo lwephromoshini lwandisa kakhulu intshisekelo yezivakashi futhi likuvumela ukuthi uhehe abafikayo abaningi.
Ngokungafani nemivuzo yokugcwaliswa kwediphozi, i- Fastpay Casino ayikho amabhonasi ediphozi anikezwa abasebenzisi njengesipho somsebenzi wabo kusayithi. Kunezinzuzo eziningi eziyizici zalolu hlobo lwensizakalo:
abagembuli abachithi imali abayisebenzisile ukuchitha isikhathi abasithandayo;
amaklayenti angathola ulwazi olwengeziwe nenzuzo ngokwenza kusebenze ama-slots awathandayo mahhala;
isipho esivela ekhasino sandisa kakhulu amathuba okuwina.
Ngokungafani nezinye izikhungo ezibonakalayo, ipulatifomu eku-inthanethi ye-FastPay ayikhawuleli amathuba wabasebenzisi bayo futhi ihlale igcwalisa lolu hlobo lwemivuzo. Imiklomelo efana nalena ingakhuphula imizwa yakho, ivuse i-adrenaline rush, futhi ikusize ubalekele izinkinga. isidlali asesabi ukulahlekelwa futhi sithola injabulo yangempela kusuka kwinqubo.
Lolu hlobo lokukhuthaza luyatholakala ngemuva kokubhaliswa kanye nokushintshela ezingeni lesibili lohlelo lwe-VIP. Inqubo yokwenza i-akhawunti yomuntu siqu ilula futhi ayibangeli bunzima ngisho nakubaqalayo. Kubalulekile futhi ngemuva kokuvula ukufaka i-akhawunti yakho bese unikeza yonke imininingwane edingekayo.
Akukho ukukhushulwa kwesiza sediphozi okunikezwa kuphela kumakhasimende asebenzayo abamba iqhaza ohlelweni lokuthembeka. Inombolo nosayizi wazo ziyashintsha ngokushintshela ngakunye kusigaba esisha sohlelo lwe-VIP. Ezingeni eliphakeme kakhulu, ibhonasi etholakele ibalwa ngayinye kwiklayenti ngalinye.
Ngaphambi kokuqala umdlalo, kufanele ufunde ngokucophelela hhayi kuphela imithetho yomdlalo, kodwa futhi nemigomo yebhonasi yesayithi. Isipho esivame kakhulu esivela ekhasino amahhala amakhasino we-spin we-Fastpay , afaka inani elithile lama-spins wamahhala endaweni ethile. I-spin ngayinye inosuku lokuphelelwa yisikhathi, futhi uma umsebenzisi engakwazanga ukusebenzisa isipho, zonke izimali eziwinwe kuso ziyasha.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi ngokudlala ngale ndlela, iklayenti alikwazi ukukhulisa isilinganiso sayo, ngoba Amaphuzu Esimo anikezwa kuphela ngenkathi edlalela imali yangempela.
I-Fastpay Casino ayinikezi abagembuli bayo ibhonasi yesikhuthazo yokungabhaliswa, kepha ihlala inika ithuba lokujikeleza ama-slots wezintandokazi zawo mahhala. Ukukhushulwa kokuqala okunjalo kuyatholakala lapho uthola ibanga lesibili lohlelo lokuthembeka kwe-VIP. Ngeleveli ngayinye entsha, umsebenzisi uthola inani elikhulayo lama-spins wamahhala enguquko nanjengesipho sokuzalwa.
Kusukela ezingeni lesishiyagalombili, ikhasino le-Fastpay alikho ibhonasi yediphozithi enikezwa ngendlela yemali, nayo eqhubeka nokwanda ngokushintsha kwesimo. Akunakwenzeka ukudlulisa izimali ekhadini kanjalo nje. kumele zidlalwe kuqala. Ngaphezu kwalokho, ngokuphelele mahhala amakhasimende asebenzayo angabala ngoMgqibelo ukuthi akukho diphozithi, nayo eqala ukuhlinzekwa kusuka ezingeni lesibili lohlelo lokwethembeka. Ngaphandle kokubheja, amakhasimende angathembela ekubuyiselweni kwemali yanyanga zonke okutholwe esigabeni sesishiyagalolunye sohlelo.
Kunemithetho eminingi iklayenti okufanele liyicabangele ngaphambi kokusebenzisa isipho esivela esikhungweni. Okokuqala, udinga ukukhumbula ukuthi ukubheja kwalolu hlobo lwebhonasi kungu-x10 wokuwina okuvela ku-spin yamahhala. Yilapho kuphela umdlali azokwazi ukukhipha imali kwi-akhawunti yakhe.
Inombolo ye-FS iyanda ngokushintshela ezingeni elisha:
okwesibili, isikhungo sihlinzeka ngama-FS angama-20;
Uma isikhungo singamemezelanga ukukhanselwa, khona-ke ithuba lokwenza inzuzo kulokhu kukhushulwa likhawulelwe ngumkhawulo. Inani liyi-50 USD/EUR, kwezinye izimali - i-CAD, AUD, NZD, NOK, PLN, JPY, ZAR, inani libalwa ngokulingana. Ngokuphathelene nama-cryptocurrensets, isimo sinje ngokulandelayo: 0.95 LTC, 0.125 ETH, 0.24 BCH, 0.005 BTC, 22,000 DOGE. Uma umgembuli ephumelela ekuwineni okuningi, umehluko uzobhalwa ususwe kunani eliphezulu kakhulu.
Ngemuva kwezinga lesishiyagalombili, abadlali bathola lo mklomelo ngendlela yebhonasi yemali. Inani ngu:
8 - 10,500 ruble, 150 EUR/USD;
Ama-ruble ayi-9 - 70,000, i-1,000 EUR/USD;
Ama-ruble ayi-10 - 175,000, 2,500 EUR/USD.
Kwezinye izimali, inani likhokhwa ngokulingana. Ngokungafani namazinga wangaphambilini, kulokhu akunamkhawulo ngosayizi we-win. I-coefficient yokubheja nayo i-x10 yenani lebhonasi. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi uhlelo aluzihlanganisi ngokuzenzekelayo umklomelo onjalo, ngakho-ke, kufanele ubike ushintsho esimweni sakho kwinsizakalo yokusekelwa kwezobuchwepheshe ukuze ukwazi ukuthola inani lezimali. Isithonjana sesevisi yokusekelwa kwezobuchwepheshe sitholakala ezansi kwewebhusayithi esemthethweni ye-Fastpay yekhasino , ekhoneni elingakwesokudla kwesikrini.
Iklayenti ngalinye, kusukela ezingeni le-VIP lesibili, lithola lolu hlobo lokuhalalisela ekuphathweni kwewebhusayithi esemthethweni. Isimo okuwukuphela kwaso lapho kungenzeki ukusithola khona ukuqhwalela i-akhawunti yomuntu siqu noma ukuzikhiphela ngaphandle kweklayenti. Bathola isipho kanye ngonyaka futhi badunyiswa ngosuku lokuzalwa ngemuva kokuthi umgembuli axhumane nensizakalo yokusekelwa kwezobuchwepheshe. Ungasebenzisa ukuhalalisela kuphela ngalolu suku. Umlingani wokubheja walesi sipho ngu-x10.
Isimo - isamba esiphelele sokubheja selokhu kwatholwa ibhonasi efanayo yangaphambilini kufanele okungenani sibe uhhafu wenani lamaphoyinti adingekayo ebangeni lesikhathi somdlali. Umkhawulo wokuwina ngu-50 EUR/USD, nakwezinye izimali - i-NOK, i-CAD, i-ZAR, i-AUD, i-PLN, i-NZD, i-JPY ngokulingana. Kuma-cryptocurrensets, imikhawulo yenzuzo izoba yi-0.95 LTC, 0.005 BTC, 0.24 BCH, 0.125 ETH, 22.000 DOGE.
Ngokufanayo nomvuzo wokukhulisa isimo, umklomelo unikezwa kusukela ezingeni lesibili. Kuze kube yisishiyagalombili, inikezwa ngendlela yama-spins amahhala, futhi ngemuva kwalokho - njengesikhuthazo semali. Inani lama-spins nezimali zamahhala liyafana nomvuzo wokukhulisa isimo.
Lapho uthuthela ezingeni lesibili, amakhasimende angathembela kwesinye isipho - izikhala zamahhala ngoMgqibelo. Ukuze uthole irisidi eliyimpumelelo, kufanele ufeze lo mbandela - ezinsukwini ezinhlanu zokusebenza, lo gemler kufanele enze inani eliphansi lokubheja elibekwe yisikhungo.
Inani liyi-100 USD/EUR, 0.25 ETH, 0.01 BTC, 1.9 LTC, 0.5 BCH, 44.000 DOGE. Inani lama-spins wamahhala liyakhuphuka ngokushintshela ezingeni elisha kusuka ku-15 kuye ku-500.